Iva Mutengesi - Jinhua Ecubmaker Technology Co, Ltd.
Kufungidzira Pro II
EcubWare 4.2.1 Chinyorwa
Nekuvandudzwa kweiyo 3D yekudhinda tekinoroji, 3D printa kunyorera kuri kuwedzera uye kuve kwakakurumbira muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva. Inoita kunge mukana wakanaka wekuwana mari uye kuvaka rako basa munyika nyowani. Kuve mumwe wekutanga kugadzira mu3D kudhinda Musika, isu tine ruzivo mukutsvaga, kusimudzira uye kushambadzira. Kuitira kuti vanhu vafarire kunakidzwa kweve 3D maprinta, uye kuti zviite nyore kune vedu EcubMaker 3D mafeni kuti vashandise maprinta, EcubMaker iri kutsvaga vatengesi, vagoveri, uye vatengesi pasirese! Sezvo, vatengi vedu vanofukidza mabasa ese nehunyanzvi, senge vatengesi, vatengesi, varapi vezvidzidzo, nezvimwewo hazvina basa vane chishuwo chekutanga rako bhizinesi, kana iwe uine mamwe mazano akanaka nezve iyo 3D purinda. Kana iwe uchifunga kuti iwe une ruzivo rwakakwana kuti umhanye yako pachako mhando. OEM sevhisi inowanikwa. Unogamuchirwa kuti ubatane nesu izvozvi. Seye inotungamira yekutsvagisa uye yekugadzira kambani ye3d kudhinda, isu tinogara tichitora mhando yekutanga, tarisa pakuita yakanakisa purinda ine yakakwira kuita, uye nekupa yakanakisa sevhisi kune wese munhu. Mese munogamuchirwa kutengesa zvigadzirwa zvedu. Chinangwa chedu ndechekurega kuvimba kwako kuve hupfumi. Tinoda kuwana kuhwina-kuhwina mamiriro uye kuvaka hukama hwakareba.
1. Brand Kubatsira:
EcubMaker 3D Technology, iyo yakasimbiswa muna 2013, inonyanya kusanganisa 3d yekutsvagisa tsvakiridzo, dhizaini, uye kutengeserana seyakazara. Uye zvakare, mavhidhiyo ekuongorora emuchina weEcubMaker akaona mazana ezviuru zvemaonero paYouTube. Mazhinji mawebhusaiti ekudhinda e3D akaongorora zvakanyanya maprinta edu, akativara seyakanakisa kodhi yemhando kashoma, seGadget Flow, Roboturka, 3Dpc.com zvichingodaro.
2. Tekinoroji neBasa Rutsigiro
EcubMaker R & D timu revanjiniya vane hunyanzvi vane yakawanda-yakadzika hunyanzvi ruzivo mune ye 3D kudhinda yakaiswa kuti ipe hunyanzvi hwehunyanzvi. Zvichakadaro, yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi zvakare yakapihwa neEcubMaker 3D nyanzvi. Isu tine yedu yepamusoro-soro mushure mekutengesa sevhisi timu, inonamatira kune pfungwa ye "Vatengi Nyaya" ine yakamisikidzwa sevhisi system yeakanyanya kushanda, nyore, uye kujekesa. Parizvino isu tine mukurumbira wepamusoro mune yedu Mushure mekutengesa rutsigiro nekuda kwe kupindura kwavo nekukurumidza uye kubatana kwehukama.
3. Hunhu Hwakavimbiswa
Zvigadzirwa zvedu zvese zvakapfuura yakawanda yemhando yepamusoro uye zvitupa zvemamiriro ekunze senge FDA, CE, FCC, uye ROHS, nezvimwewo isu takaisa zvibodzwa zvitatu mukati mekambani. Zvese zvikamu zvakaedzwa nguva yakati wandei zvisati zvarongedzwa uye timu yedu ine ruzivo rwekudzora mhando yakapfuura nemuyedzo wakareba kwenguva refu kune wese mupurinda kuti ive nechokwadi chekumisikidzwa kuenda kuchikepe. Kuti usvike kune yekupedzisira yekupakata chikamu chega chega purinda inoda kupasa yega yehunhu kudzora bvunzo neimwe nzira isu tinotumira iyo kune remanufacturing department. Bhokisi rakazara neiyo yepamusoro Styrofoam yekudzivirira iyo printa kubva pakukwira kwakanyanya uye inofanirwa kupfuura nemuyedzo wekutsungirira usati wagadzirira kutumirwa. Saka chero munhu anogona kuzorora achivimbisa kuti muprinta achasvika panzvimbo pasina chero chemukati chakakuvadzwa nekutakura.
4. Mari Yehupfumi
Isu tinotenda kuti maPrinta edu ndeamhando dzese dzevanhu. Hatimbofi takafunga nezvevamwe vatengi zvinhu. Saka funga nezvemutengo zvinoenderana nemari shoma uye upe yakanakisa sevhisi kune yega yega chikamu. Yedu zvigadzirwa zvigadzirwa mutengo wakachipa pane iyo yazvino yakafanana chikamu printa yakatenderedza. Sezvo isu tiri kutsvaga kwenguva yakareba bhizinesi, isu tinoda kuwana kuvimba kwete kungofunga purofiti. Zvinotarisirwa neEcubMaker kuita kuti munhu wese azive nezve 3D kudhinda tekinoroji uye vanakidzwe nekunakidzwa vachiita zviroto zvavo kuti zviitike. Usazeze kutibata nesu pamutengo wekutengesa kana kubhururuka kutenga kuchidiwa. Nezvakawanda zvekutenga zvakanakira uye yepamusoro yekutengesa cheni manejimendi, EcubMaker inoderedza zvakanyanya mutengo wezvigadzirwa kuverengera purofiti yevatengesi, kuitira kubatsira vanogumisa-kuchengetedza mari.
Chii chatinotarisira kubva kwauri?
• Unzwisise zvirinani nezvePrinta yaunoda.
• Tiudze nezvehurongwa hwebhizinesi rako nekambani yako.
• Shandira pamwe nesu nezve mutengo. Sezvo isu tichigara tichipa wakanyanya kutaurirana mutengo kwauri.
• Kwidziridza muchiso yedu uye 3D yokudhinda tsika vachishingaira.
• Kana iwe uchifarira kudonhedza, isu tiri vepachokwadi kubatira pamwe newe.
Nyora apa: Sales01@zd3dp.com
Taura nesu kunyange iyi email. Mahara kutitaurira nezvako uye nemabatiro atingaite kukudziridza hurefu bhizinesi hukama. Tiri kutarisira email yako. Iwe uchawana mhinduro nekukurumidza patinoigamuchira. Ndatenda zvikuru nenguva yako.
© Copyright - 2014-2020: All Rights Reserved.